सार्वजनिक यातायातमा छुट
एससीएमपी February 16, 2019
हङकङका यात्रुवर्गले आजदेखि सार्वजनिक यातायातमा तीन सय हङकङ डलरसम्म अनुदान पाउनेछन् ।
पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी स्किम जनवरी १ देखि लागु गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले यात्रुलाई सुविधा दिन सन् २०१७ को नीति सम्बोधनमा योजनाबारे घोषणा गरेकी थिइन् ।
योजना अन्तर्गत‚ सार्वजनिक यातायातमा मासिक चार सय हङकङ डलरभन्दा धेरै खर्च गर्नेलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । यस्तो अनुदान रकम बढीमा तीन सय हङकङ डलर हुनेछ । अनुदान दिएवापत सरकारले वार्षिक २ अर्ब ३० करोड हङकङ डलर आर्थिक भार बोक्नुपर्नेछ ।
जनवरीमा मात्रै‚ १८ करोड ६० लाख हङकङ डलर बराबरको अनुदान वितरण गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने २३ लाख यात्रु लाभान्वित भएका छन् ।
योजनाका लागि आवेदन दिनुपर्छ ? उमेर वा आम्दानीको हदबन्दी छ कि ?
कुनै आवदेन वा अक्टोपस प्रि–रेजिष्ट्रेसन आवश्यक छैन । मासिक अनुदान हिसाब गर्दा अक्टोपस कार्डबाट भुक्तान गरिएको मासिक यातायात खर्च पनि स्वत: समावेश गरिनेछ ।
लाभान्वितका लागि उमेर वा आयस्तरको कुनै हदबन्दी छैन । सार्वजनिक यातायातको मासिक खर्च चार सय हङकङ डलर नाघेसम्म सबै यात्रु यो योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन् । वृद्ध वा अपांगताजस्ता भाडा छुटजस्ता योजनाका लाभान्वितहरू पनि यसमा समावेश हुनेछन् ।
योजनामा कुन सार्वजनिक यातायात सेवा वा रूट समावेश गरिएका छन् ?
योजनामा यातायात विभागबाट अनुमति पाएका एमटिआर‚ फ्रान्चाइज्ड बस सेवा‚ ग्रिन मिनिबस‚ फेर्री‚ ट्राम‚ रेड मिनिबसका तोकिएका रूट‚ काइतो–बाहिरी द्विपवासीलाई सेवा दिने साना फेर्री‚ रेजिडेन्ट र कर्मचारीलाई सेवा दिने नन–फ्रान्चाइज्ड बस सेवा लगायत वृहत सार्वजनिक यातायात समावेश छन् ।
अनुदानप्राप्त रूटको पहिचानमा सहजिकरण गर्न‚ अक्टोपसका विज्ञापनभन्दा माथि वा कुनै प्रमाणित सवारी साधन वा जहाजमा योजनाको लोगो राखिनेछ ।
योजनामा समावेश नगरिएका कुनै सार्वजनिक यातायात खर्चहरू पनि छन् ?
तल उल्लेख गरिएका सार्वजनिक यातायात खर्च र यातायात टिकटहरू योजनामा समावेश गरिएका छैनन् ।
नगदमा भुक्तान गरिएका भाडा
एमटिआरको एकतर्फी यात्राको टिकक (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लगायत)‚ हाइस्पिड रेल टिकट‚ इन्टरसिटी टिकट‚ त्यही दिन फर्किने एयरपोर्ट एक्सप्रेस टिकट‚ लगायत ट्राभल एजेन्टबाट खरिद गरिएका एयरपोर्ट एक्सप्रेस राउन्ड ट्रिप टिकट
एकतर्फी एयरपोर्ट यात्राको बस टिकट
पर्यटकका लागि बुझाइएको टिकट खर्च
न्यु वर्ल्ड फर्स्ट बस सर्भिसेसको “रिक्सा साइटसिइङ बस” का लागि दिवा पास
अस्थायी अक्टोपस कार्डबाट भुक्तान गरिएका भाडा
फेर्रीमा साइकल‚ फ्राइट‚ सवारी साधन र घरपालुवा जनावर बोकेको भाडा
मासिक अनुदान कसरी हिसाब गरिन्छ ?
प्रत्येक अक्टोपसमा रेकर्ड गरिएका सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा भएका वास्तविक मासिक खर्चहरूको आधारमा प्रत्येक महिनाको अनुदान हिसाब गरिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा चार सय हङकङ डलर खर्च गर्ने यात्रुलाई सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । यस्तो अनुदान अधिकतम तीन सय हङकङ डलरसम्म हुनेछ ।
उदाहरणका लागि‚ कुनै महिना एक हजार दुई सय हङकङ डलर खर्च गर्ने यात्रुले अनुदान वापत दुई सय हङकङ डलर पाउनेछ ।
अनुदान कसरी दाबी गर्ने ? यसको कुनै समयसीमा छ ?
प्रत्येक महिनाको १६ तारिख र त्यसपछि‚ यात्रुले अक्टोपस एपबाट अघिल्लो महिनाको अनुदान संकलन गर्न सक्नेछन् । अक्टोपस सर्भिस पोइन्ट‚ एमटिआर स्टेसन‚ लाइट रेल ग्राहक सेवा केन्द्र‚ तोकिएका फेर्री घाट र कुनै पनि सेभेन–इलेभेन‚ सर्कल के वा वेलकप सुपरमार्केट लगायत शहरका एक हजार आठ सयभन्दा धेरै संकलन केन्द्रबाट पनि अनुदान संकलन गर्न सकिनेछ ।
संकलन केन्द्र नीलो रंगका हुनेछन् । ती स्थानहरूमा भएका रिडरमा यात्रुवर्गले आफ्नो अक्टोपस कार्ड ट्याप गरे पुग्नेछ । अनुदान अक्टोपसमा जम्मा हुनेछ ।
प्रत्येक महिनाको अनुदान तीन महिनाभित्र संकलन गर्न सकिनेछ । त्यसपछि मासिक रकम झिक्न पाइने छैन ।
मासिक अनुदान रकमबारे कसरी जाँचबुझ गर्ने ?
यात्रुवर्गले सार्वजनिक यातायातको मासिक खर्च र उनीहरूको अक्टोपसको अनुदान रकम उल्लिखित माध्यमबाट जाँचबुझ गर्नसक्नेछन् : योजनाको वेबसाइछ‚ अक्टोपस एप वा हटलाइन २९६९ ५५०० ।
नगद वा अक्टोपसको भुक्तान सेवाबाहेकका माध्यमबाट तोकिएको यातायात टिकट शुल्कलाई कसरी समावेश गर्ने ?
एउटा महिनामा भएको कुल सार्वजनिक यातायात खर्च हिसाब गर्न प्रयोगकर्ताले त्यसलाई अक्टोपस रेकर्डसँग समावेश गर्न सक्नेछन् ।
फेर्री वा ट्रामका मासिक पास र एयरपोर्ट एक्सप्रेसको दुईतर्फी टिकट लगायत तोकिएको यातायात टिकटको आधारमा‚ यात्रुवर्गले टिकट खरिद गर्दा उनीहरूको अक्टोपस कार्ड बुझाएर अथवा एमटिआर स्टेसन‚ लाइट रेल ग्राहक सेवा केन्द्र र सम्बन्धित टिकट बिक्री गर्ने फेर्री घाटहरूमा भएका यातायात टिकटको सेल्फ–रेजिष्ट्रेसन पोइन्टमा टिकट दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
यस्ता सेल्फ–रेजिष्ट्रेसन मेसिनहरू हरियो रंगका हुन्छन् । यात्रुवर्गले पहिले भौतिक टिकट र त्यसपछि अक्टोपस कार्डलाई रिडरमा ट्याप गर्नुपर्नेछ ।